Khuphela iVidiyo TikTok Akukho zintengiso zeWatermark- iTikTok ezikhupheleyo kwi-Intanethi
Khuphela iividiyo zeTikTok ngaphandle kwewatch
Ikhonkco lakho alixhaswanga !!!
I-Tiktokfull yenye yezona zikhuphelo zilungileyo zeTikTok ezikhoyo kwi-intanethi ukukhuphela iividiyo zeTikTok ngaphandle kwewatch. Awunyanzelekanga ukuba ufake nasiphi na isoftware kwikhompyuter yakho okanye kwifowuni ephathekayo, yonke into oyifunayo ikhonkco yevidiyo yeTikTok, kwaye konke ukwenziwa kwenziwa kwicala lethu ukuze ucofe nje ukhuphele iividiyo kwizixhobo zakho.
Khuphela ividiyo kwiwebhusayithi
1. Fumana ividiyo- dlala ividiyo ofuna ukuyikhuphela kwisixhobo sakho esiphathwayo, sebenzisa usetyenziso lweTikTok.
2. Khuphela ikhonkco levidiyo-khuphela i-url yevidiyo kwiwebhusayithi
3. Khuphela - buyela kwiTiktokfull kwaye uncamathisele ikhonkco kwicandelo lokubhaliweyo kwiphepha kwaye ucofe ku "Khuphela"
Khuphela ividiyo ye-douyin kwi-mobile app
2. Khuphela ikhonkco levidiyo - cofa u "Yabelana" (iqhosha lokwenza utolo ngaphezulu kwevidiyo oyikhethileyo), emva koko ucofe ku "Khuphela ikhonkco".
3. Khuphela - buyela kwiTiktokfull kwaye uncamathisele ikhonkco kwicandelo lokubhaliweyo kwiphepha kwaye ucofe u- "Khuphela".
Ukubukela iividiyo zeTikTok ezineselfowuni kwidesktop
Imfono yokujonga kunye nokukhuphela iTikTok. Bukela iTok Tok kwifom efanelekileyo kwisikhangeli sakho kwaye unokuzikhuphelela iividiyo zeTikTok ozibukeleyo ngaphandle kwewatch
Uyibukela njani iTikTok kwikhompyuter
1. Vula ulwandiso lwegoogle chrome- khangela iTikTok ukuJongwa kweMfono kunye noKhuphelo lweWatermark.
2. Faka ulwandiso
3.Vula iwebhu yeTikTok- emva koko ucofe ukongezwa ukuze ujonge amava eselfowuni
Ufaka ulwandiso apha
Ukukhuphela ividiyo yeTikTok ye-Android
Kubasebenzisi be-Android, siphuhlise usetyenziso oluqaqambileyo olusebenza kakhulu kwiifowuni eziphathwayo ze-Android kunye neetafile. Isicelo sibizwa ngokuba yi-zzTik
Khuphela iividiyo zeTik Tok ngaphandle kwewatch ngempompo enye.
Sebenzisa igalari yemidiya ukuqokelela umculo kunye nevidiyo.
Yabelana ngevidiyo nabahlobo.
Khuphela i-zzTik App apha
Ungazikhuphela njani iividiyo zeTik Tok kwi-iPhone?
Unokuzikhuphelela iividiyo zeTik Tok ngaphandle kwewatermark kwii-iPhones kuphela ngesikhupheli esikwi-intanethi nakwisikhangeli se-Safari kwisixhobo sika-Apple. Yiya kwividiyo yeTik Tok kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad kwaye ukope i-URL yevidiyo, ifoto, okanye umculo. Buyela kwisikhangeli seSafari apho iwebhusayithi yeSaveFrom.net sele ivuliwe. Cola ikhonkco kwicandelo lokufaka kwaye ucofe iqhosha lasekunene ebaleni. Kwimizuzwana embalwa, uya kufumana ikhonkco lokukhuphela.
Ndingazifumana phi iifayile ezikhutshelweyo?
Emva kokukhuphela ividiyo yeTikTok, umculo okanye iifoto, zonke iifayile ziyafumaneka kwifolda, emiselwe ngokuzenzekelayo ukugcina yonke imixholo kwi-Intanethi. Ukuba awunazo ezinye iisetingi, incwadi eneenkcukacha engagqibekanga ibizwa ngokuba yi -Downloads.
Uyikhuphela njani i-tiktok
Unokuzikhuphelela usetyenziso lweTikTok ngugoogle play yevenkile ye-android okanye yeapile ye-ios. Vula umdlalo kaGoogle okanye ivenkile yeapile emva koko ukhangele iTikTok, ungabona usetyenziso lweTikTok lokukhuphela kwifowuni yakho. Ukuba ingingqi yakho inokubona i-TikTok app, ungatshintshela ingingqi kwi-US ukuze uyikhuphele
Ngaba i-zzTik isimahla?
I-zzTik simahla Inkqubo yokukhuphela iVidiyo ukukhuphela iividiyo zeTikTok ngaphandle kwewatch. Ukwabukela ividiyo yeTik Tok kule app ngokulula nangokulula